Anyaukwu, Egwu na Ndị ọchụnta ego Gbanyere | Martech Zone
Anyaukwu, Fearjọ na Ndị Ọchụnta ego Na-agaghị nke Ọma
Ọdịiche kachasị m hụworo na ụlọ ọrụ niile m na-arụ ọrụ maka ihe ịga nke ọma na ọdịda bụ ikike onye ọchụnta ego ma ọ bụ azụmaahịa na-eme n'ezie. Ọ na-ewute m ịnọ na-ele ndị enyi na ndị ọchụnta ego ibe m anaghị achọpụta ọganiihu ha naanị n'ihi na ha anaghị egbu egbu. Jọ na anyaukwu bụ ihe abụọ m hụrụ na-egbochi ndị ọchụnta ego na ụzọ ha.
Lee ihe atụ ole na ole:
Onye ọchụnta ego A nwere nnukwu ngwaahịa nke na-arụ ọrụ mana enweghị mmepe, a na-akọwaghị aha ya na adịghị njikere maka oge mbụ. Ruo afọ 3 ugbu a, ọ na-agba wiil ya. Ọ nwere atụmanya na-ekpo ọkụ ma ha jụrụ oyi. O nwere ohere maka ndị mmekọ nwere ọgụgụ isi, mana o tufuru oge ha ma mechaa tụfuo ha. Ọ bụ micro-ijikwa akwụkwọ iwu, ahịa, na ihe niile metụtara ụlọ ọrụ n'ihi na ọ na-eche na ya nwere ike ime ya niile. Afọ 3.
Ka anyị kwuo na ụlọ ọrụ a ga-abụ ụlọ ọrụ $ 500k n'ime otu afọ. Ruo taa, nke ahụ pụtara na ha efuola ihe karịrị $ 1 ​​nde n'ihi arụghị ọrụ ha.
Ka anyi kwuo na ulo oru a ruru nde $ 5. Onye nwe ya achọghị ịhapụ oke ụlọ ọrụ ya na ndị nwere ike inyere ya aka wepu ya. Ọ na-eche ma ọ bụrụ na ọ hapụkwuo 10% na nwe, na ọ na-enye $ 500k na onye òtù ọlụlụ. Cheta na $ 1 nde na ego furu efu? N'ihi na ọ nyeghị $ 500k na onye òtù ọlụlụ, ọ na-now furu efu $ 1 nde ke revenue… na ọtụtụ ndị na ego ịbụ ya. Nke ahụ pụtara na isi ike ya na mkparịta ụka dị ala na-efu ya ego. Ego dị egwu, amaara m.
N'ezie, pasent ndị ahụ apụtaghị ihe ọ bụla ruo mgbe ego ga-enweta n'azụ ya. Ọ bụrụhaala na ọ nwere ike ijigide ọtụtụ nwe, ọ ga-edebe ọtụtụ azụmaahịa ahụ. 100% nke ụlọ ọrụ na-eme $ 100ka afọ bụ $ 100k. 51% nke ụlọ ọrụ na-eme $ 500ka afọ karịrị $ 250k kwa afọ. Kedu onye chọrọ ịma ma ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ gị ga-adọta 10% ọzọ ma ọ bụrụ na ọ na-eto eto ala gị 250%?! Not naghị achụrụ ihe ọ bụla ọnụ na ụlọ ọrụ gị bara uru nke ọma ma ị na-enwetakwu ego.
Onye ọchụnta ego A anaghị eme ka azụmahịa ya kwụsị. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ na-eme, e wuru ya na ndị mmadụ na enweghị ihe ọ bụla etinye na ụlọ ọrụ yabụ na ọ nweghị ihe ọ bụla ma wepụ ya. 10 afọ site ugbu a, ọ ka na-atụgharị isi ya na ihe mejọrọ - ikekwe na-ata ụta maka talent ndị gbara ya gburugburu, n'amaghị na ọ bụ nhọrọ ya.
Onye ọchụnta ego B na-atụ ụjọ. O nwetara ngwa di nma nke nwere ikike nwebisiinka, ụghalaahịa, na patenti. O mefuola ego na ndị ọka iwu ma were oge ya na-agagharị na forntanetị maka ndị ahụ nwere ike iji ụghalaahịa ya mebiri. Ọ gaghị arụ ọrụ na onye ọ bụla n'ihi ụjọ na ha ga-ezu ohi echiche ya. Ọ tụkwasịrị onye ọ bụla obi. Na n'ihi na ego ya niile kekọtara na iwu na oge ya na-ekiri ka ndị mmadụ 'gbaziri' echiche ya - ngwaahịa ya agaghi aga n'ihu.
Ihe dị mma na-abịa wee lie Onye ọchụnta ego B. Ọ na-eche ihe mere taa.
Ndị ọchụnta ego na-aga nke ọma anaghị ekwe ka anyaukwu ma ọ bụ ụjọ na-egbochi ha. Ha na-amata adịghị ike ọkachamara ha ma na-ahụ talent iji merie ndị ahụ. Ha achọghị ịma ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ọ bụla na-aghọ nde mmadụ na mgbakwunye na akụ na ụba ha… n'eziokwu, ha na-enwe ọ toụ ịmepụta akụnụba maka ndị ọzọ. Ha anaghị egbusi oge na asọmpi ma ọ bụ ndị naysayers… ha na-eme, kpere, kpere.
Tags: achụmnta egoegwuanyaukwu
Isetịpụ nkwalite na Fire na WildFire
Ndi Ebe nrụọrụ weebụ Gị Na-ekwu “Na-ezere”
David Castor kwuru
Jul 26, 2010 na 7: 39 AM
Doug - Isi ihe. Agụrụ m otu edemede na ọnwa ndị a Harvard Biz Review nke mesiri ike na atụmatụ ekwesịghị ịhapụ iche na igbu ya - ha kwesịrị ịbụ otu. Okwu a na-ekwukarị bụ na ọtụtụ azụmaahịa na-ada n'ihi enweghị isi ego. Ekwenyere m na ọ bụ n'ihi ọdịda na njikwa njikwa. Captured jidere isi ihe ndị a nke ọma. Daalụ.
Jul 26, 2010 na 10: 13 AM
gude mkpụkpu, gude egbugbu. Tozọ esi aga n’ihu bụ ịga n’ihu ya ma ghara ichere ka ọ bịakwute gị. Ezigbo ihe ebe a.
Apr 11, 2011 na 12: 59 PM
Kama ide edemede a na-enweghị isi, gịnị kpatara na ị gaghị aga n'ọma ahịa wee bụrụ onye ọchụnta ego na-aga nke ọma ma ọ bụrụ na ị chere na ọ dị mfe?
Apr 16, 2011 na 6: 11 AM
Na na! Guyfọdụ nwoke nwere aha otutu aha na-enweghị aha bịara ịkekọrịta, echiche, na isiokwu ọ na-ekwenyeghị! Tozọ na-aga internet!